समरमा स्टाइलिस्ट फर्मल लुक्स - फेसन - प्रकाशितः असार ४, २०७६ - साप्ताहिक
नेपाली फेसन बजार अझै पनि भारतीय सिरियलहरूबाटै प्रभावित छ । वेस्टर्न लुक्सलाई फलो गरे पनि नेपाली फेसन भारतीय फेसनबाट टाढिन सकेको छैन । यो वर्षको समरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फेसनमा ब्राइट अरेन्ज, पर्पल, नेभी ब्ल्यू आदि कलर हावी छन्, तर यी कलरहरू नेपाली फेसनमा त्यति प्रयोग हुन सकेका छैनन् । यी कलरमा डिजाइन बनाइए पनि फेसन पारखीहरू यसपटक पनि गत दुई–तीन वर्षदेखि हावी कलर पेस्टलमा पिच, मिन्ट ग्रिन, लाइट ब्ल्यू, बेबी पिंक, स्ट्रबेरी आदि रुचाइरहेका छन् । डिजाइनर वेयरमा भने भारतीयसँगै वेस्टर्न टचका पहिरन पनि भित्रिएका छन् । पहिले जस्तो पहिरनमै धेरै खर्च गर्ने तथा हेबी लुक्समा देखिने चाहना घटेको छ । अहिले समयले ल्याएको परिवर्तनअनुरूप पहिरनसँगै जुत्ता, घडी, मेकअप, ज्वेलरी आदिमा खर्च गर्ने क्रम बढ्दो छ । त्यसैले अहिले निकै महँगा हेबी पहिरनभन्दा डिजाइनर पहिरन चल्ती छन् ।
यसपटकको इस्टर्न टच डिजाइनहरू
स्ट्रेट कुर्ती : स्ट्रेट कट भएका कुर्ता यस पटकको समरमा धेरै नै चल्ने डिजाइनमध्ये एक हो, जसमा पाइन्ट स्टाइलका सुरुवाल तथा नेरो बटन भएको पाइन्ट फेसनमा छ । ग्रन्च जिन्स तथा चुज जिन्समा पनि यी कुर्ती स्टाइलिस्ट देखिन्छन् । फ्लोरल प्रिन्ट फेब्रिकका कुर्ती समरभरि नै चल्नेछन् । ठूलो–ठूलो फ्लोरल प्रिन्टमा मिक्स कलरका कुर्तीमा स्ट्रेट डिजाइनमा साइड कट, फ्रन्ट कट, ब्याक कट, प्लेन पाइपिङ, साइडमा प्लेन फेब्रिक आदि डिजाइन गराउन सकिन्छ । ह्वाइट बेसमा ब्ल्यू, रेड, एल्लो, पिंक कलरको फ्लावर प्रिन्ट भएका जर्जेट तथा साटनका कुर्ती सबैको च्वाइसमा छन् ।
फर्मल कुर्ती : रसिल्क, कटन सिल्क तथा लाइक्रामा तयार पारिएको डिजाइनर स्ट्रेट लाइनका कुर्तीहरू पूजालगायत अन्य पारिवारिक कार्यक्रमका लागि उपयुक्त हुन्छन् । यसको मुनि स्ट्रेट पाइन्ट नै सुहाउँछ । यो पहिरन हेर्दा कुल तथा सजिलो हुनुका साथै यसमा सल लगाउनुपर्ने झन्झट पनि हुँदैन ।
सारी तथा ब्लाउज : हेबी सारी लगाउने चलन स्वात्तै घटेको छ । पूरै भरेको सारी एवं हेबी ब्लाउजको फेसन हटेर यो समरका लागि हल्का, मज्जाले मुजा बस्ने तथा शीतल कलरका सिम्पल सारीको फेसन छ । ६० को दशकमा धेरैजसो राजपरिवारका सदस्यहरूले लगाउने अर्गन्जा सारी पुनः फेसनमा छ । हेर्दा हल्का, लगाउँदा र हिँड्दा सजिलो समेत हुने भएकाले अहिलेको पुस्ताले यो फेब्रिकका सारी बढी रुचाइएको पाइन्छ । अहिलेको पुस्ताले कुनै पनि पहिरन लगाउँदा मेन्टेन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा ध्यान दिन थालेको छ । लाउड टोन डिजाइन हट्दै सफ्ट टोन डिजाइनका सारीहरू फेसनमा छन् । सदावहार सिफन र जर्जेटका प्रिन्टेट सारी पनि फेसनमा छन् ।
समरका लागि फ्लोरल प्रिन्टका लाइक्रा ब्लाउज पनि चल्तीमा छ । यसमा भित्री लाइनिङ हुँदैन, पोल्दैन र टिसर्ट लगाएजस्तो फिल हुनु नै लाइक्रा ब्लाउजको मुख्य विशेषता हो । स्ट्रेचेबल फेब्रिकका ब्लाउजमा साइड जिपर तथा ब्याक जिपरको फेसन छ । अहिले हुकको चलन पूरै हटिसकेको छ । सिल्क तथा साटनका ब्लाउजमा लाइनिङ राख्दा पनि डिजाइन राम्रो देखिन्छ ।
गाउन : वेस्टर्न पहिरनमा बोल्ड प्रिन्ट भएका गाउन यो वर्षको फेसनमा छन् । भोलुम बढी भएको प्रिन्सेज स्टाइलका गाउन राम्रा हुन्छन् । वेस्टर्न गाउनले स्लिम र अग्लो समेत देखाउँछ । प्लेन मेटालिक साइनिङ भएको गाउन स्टाइलिस देखिन्छ । फ्रन्ट स्लिट, वन अफ सोल्डर गाउनले पनि समर पार्टीमा आकर्षक
लुक्स दिन्छ ।
टिनएजर समर लुक्स
जिन्समा प्लेन ह्वाइट टप्स टपिङ गरी माथिबाट प्रिन्टेड समर ज्याकेट आकर्षक देखिन्छ । माइक्रो सर्ट ड्रेस, स्कर्टमा फ्लोरल प्रिन्ट सर्ट, रक्कि पाइन्ट, रक्कि हाफ पाइन्ट, रक्कि स्कर्ट फेसनमा छ । लाइट कलरको प्लेन, प्रिन्टेड तथा जोमेट्रिक थ्री क्वाटर पाइन्ट पनि यो वर्षको समर फेसनमा छन् । यस पटक हट पाइन्ट तथा अफ सोल्जर टप्स युवापुस्ताका लागि हट केकका रूपमा भित्रिएको पहिरन हो ।
गत वर्ष जस्तै यस पटक पनि वानपिस पहिरन, ए लाइनको तथा फ्लेयर भएका नी लेन्थका वानपिस पनि फेसनमा छन् । यो समरमा प्रिन्टेड वानपिसका साथै एल्लो, ग्रिन, लाइट पिंक, चकलेट पिंक, बेबी पिंक आदि रंग चल्तीमा रहनेछ । टिनएजरहरूका लागि भने टुपिस स्कर्ट तथा टप्स चल्नेछ । यो उमेरकाले फ्लेयर भएको टप्स तथा स्कर्ट बढी रुचाउनेछन् भने रफल्स टप्स र स्कर्ट, रफल्स टप्स तथा हाफ पाइन्ट पनि फेसनमा रहनेछ । टिनएजरहरूबाट सी ग्रिन, अफ ह्वाइट, ह्वाइट कलर आदि बढी रुचाइनेछ ।
समर स्पेसल स्मार्ट आइडिया
समरमा कुनै पनि आउटफिट किन्दा सजिलो हुने छान्नुपर्छ । हेवी वर्क र डार्क कलर समरका लागि उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले फेब्रिक, कलर, इम्ब्रोडरीलाई छानेर मात्र किन्नुपर्छ । स्ट्राइप्स, चेक्स, सफ्ट, फ्लोरल तथा पोल्का डट्स समर कलेक्सनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
समरमा कटनकै आउटफिट राम्रो देखिन्छ । पिंक, लेंवेन्डर, एल्लोजस्तो सफ्ट कलरको कम्बिनेसन राम्रो देखन्छ । धेरैजसो व्यक्ति समरमा कालो रंग लगाउन चाहँदैनन् । यद्यपि इभिनिङ पार्टीका लागि कालो रंगको गाउन, छोटो स्कर्ट तथा सारी एलिगेन्ट देखिन्छ ।
अहिले नेपाली फेसनमा के–कस्तो ट्रेन्ड चलिरहेको छ ?
इस्टर्न र वेस्टर्नको फ्युजन फेसन चलिरहेको छ । हामी पहिलेदेखि इस्टर्न फेसनको पछि लाग्थ्यौं । फलानी हिरोइनको जस्तो अथवा फलानो सिरियलको कुनै पात्रले लगाएको पहिरनबाट नेपाली फेसन प्रभावित थियो तर अहिले वेस्टर्न पहिरन पनि उत्तिकै रुचाइएको छ । अहिले बलिउडबाट प्रभावित लेहेंगा चोलीमा वेस्टर्न गाउनको मिक्स डिजाइन फेसनमा छ भने डे वेयरमा वेस्टर्न तथा पार्टीका लागि इन्डियन लेहेंगा चोली नै चलनचल्तीमा छ । अहिले आएर नेपाली फेसनले आफ्नो आइडेन्टी खोजेजस्तो लाग्छ । फेसन बजार हेर्दा इन्डो वेस्टर्न र वेस्टर्न फेसनकै ट्रेन्ड छ ।
तपाईंकहाँ कस्ता ग्राहक बढी आउँछन् ?
बढी गरेर प्लस २५ का महिलाहरू आउँछन् । मेरो टार्गेट पनि यही उमेर समूह हो । किनभने टिनएजरहरूले चाहेर पनि डिजाइनर ड्रेस बनाउन सक्दैनन् । २५ कटेका महिलाहरू नै डिजाइनरकहाँ धाउने उमेर समूह हुन् ।
कामकाजी महिलाहरूमाझ के–कस्ता पहिरन चल्तीमा छन् ?
अफिसियल वेयरका लागि पाइन्टमा एंकल लेन्थ, चुज तथा स्किनी पाइन्ट फेसनमा छ । यस्ता पाइन्ट–सर्टले एकदमै स्मार्ट लुक्स दिन्छन् । सर्टको स्लिभमा भने ठूलो बेली वा फ्रिल फेसनमा छ । एउटै मेटेरियलको टप एन्ड बटन पनि फेसनमा छ । अहिले कामकाजीहरूका लागि समर कोट र पाइन्ट पनि एकदमै रुचाइएको छ त्यस्तै प्रिन्टेड, लेनिन तथा कटनका समर कोट–पाइन्ट पनि फेसनमा छन् ।
अहिले कुन फेब्रिक चलिरहेको छ ?
समरका लागि रेबन, कटन, लेनिन, सिफ, जर्जेट तथा लाइक्रा नै उपयुक्त हुन्छन् ।
विष्णु गौतम, इम्याजिन बुटिक, कुपन्डोल
आँचल शर्माको फरक लुक्स
मखमली मखमलीको फस्ट लुक्स
घामड शेरेमा निश्चल लुक्स